महाशिवरात्री मनाउँन किन आउँछन् नेपालमै ? – दर्पण छायाँ
मुख्य पृष्ठधार्मिकमहाशिवरात्री मनाउँन किन आउँछन् नेपालमै ?
Admin | १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:५६	Comments
काठमाडौं । भगवान् शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामाकरण भएको महाशिवरात्री । यो पर्व कालरात्री, सुखरात्री र शिवरात्री नामक चार प्रमुख रात्रीमध्ये महाशिवरात्री एक पवित्र पर्वका रुपमा लिने गरिएको छ । यस वर्ष फागुन ९ गते शुक्रबारका दिन शिवरात्री पर्व परेको छ ।
फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि आधा रातसम्म भएको दिन शिवरात्री व्रत गर्ने साधकले अनन्त फल प्राप्त गर्दछ भनी नारदसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो पवित्र पर्वका दिन स्वर्गबाट पनि देवताहरु भगवन पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउन चाहने भनेर पुराणहरुमा उल्लेख गरिएको छ । चतुर्दशी तिथिका स्वामी शिव हुन् अर्थात् भगवान् शिवको तिथि भनेको चतुर्दशी हो । त्यसैले यस तिथिको रातिमा व्रत गरिने भएकोले यस व्रतको नाम शिवरात्री रहन गयो । उक्त दिन शिवजीको चार प्रहर नै पूजा हुने विधान रहेको छ । सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै यस दिन मध्यरात्रि कालमा भगवान् शङ्कर ब्रह्माबाट रुद्रका रुपमा अवतरण भएको पुराणहरुमा उल्लेख गरिएकाले पनि शिवरात्रीको विशेष महत्व रहिआएको छ ।
शिव पुराणको ३५१ नौ श्वलोकमा श्री पशुपति लिंगकोबारेमा ब्याख्या गरिएको छ । उक्त श्लोकमा ज्योतिर्लिंगकै रुपमा पशुपतिनाथको लिंगको पनि व्याख्या गरिएको छ । भगवान् आशुतोष शिव एक समयमा सुन्दर तपोभूमि प्रति आकर्षित भएर कैलाश पर्वत छोडेर मृग चरणको भूमिमा रमाउन आफ्नो रुप परिवर्तन गरेर मृगको रुप धारणगरी क्रिडा गर्न आएको उल्लेख गरिएको छ । सुन्दर तीन सिङ भएको मृगको रुपधारण गरेर रमाउँदै बसेको क्षेत्र पशुपतिनाथ भन्दा उत्तर भागमा पर्ने मृगस्थली भएको पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । लामो समयसम्म कैलाश पर्वतमा शिवलाई नदेखेपछि ब्रह्मा र बिष्णुलाई चिन्ता लाग्यो र दुवैजना शिवको खोजिमा निस्कएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । आफ्नो ध्यानदृष्टिले हेरेर उक्त सुन्दर भूमिमा शिवजी भएको थाहा पाएपछि ब्रह्मा र बिष्णु मृगस्थलीमा शिवलाई खोज्न आएको प्रसङ्ग पनि शिवमहा पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सुन्दर भूमिमा मृगहरु चरिरहेका थिए, उक्त भीडमा दिव्यमान तीन सिङ भएको मृगमाथी दुई देवताहरुको ध्यान केन्द्रीत भयो । ब्रह्माले आफ्नो दिव्य दृष्टिले उक्त सुन्दर मृग शिवजी नै भएको थाहा पाए । तत्कालै उक्त मृगलाई नियन्त्रणमा लिन समाउने प्रयास गर्दा सिङ नै भाँचिएर तीन टुक्रा भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । समाउँदा तीन टुक्रा भएको सिङ मध्ये एक टुक्रा यहीँ पवित्र भूमिमा झर्याे र त्यहाँबाट महारुद्र उत्पन्न भयो, जुन पशुपतिनाथका नामले प्रसिद्ध रहन गयो । शिवको इच्छाअनुसार भगवान् विष्णुले नागमणिसहित शिवको लिंगका रुपमा स्थापना गरिएको र उक्त लिंग पशुपतिनाथले प्रसिद्ध रहेको कुरा शिव पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । जसरी गणितमा शून्य केहि नभएर पनि सबथोक हुन्छ । जस्तै कुनै अंकको दाहिने भएर शून्यले त्यसको दशगुणा मूल्य गरिदिन्छ । त्यसैगरी शिवलिंगको पूजाबाट भगवान् शिव पनि दाहिने (अनुकूल) भएर मानवमात्रलाई अनन्त सुख–समृद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ ।
पशुपति भन्नाले पाश नभएको भन्ने बुझिन्छ । प्रकृतिदेखि माथि माया, त्यसदेखि माथि महामाया, त्यसदेखि माथि चिति, त्यसदेखि माथि परा शक्तिहरु छन् । पशुपतिनाथ पञ्चमुख भएकाले पञ्चवक्रम भनेर भनिएको छ । नेपाल महात्म्य तथा जनश्रुतिका अनुसार नित्यानंद नामगरेका एक जना ब्राह्मणले गाई पाल्ने काम गर्दथ्ये । उनले पालेको गाईहरुमध्ये कैली रंगको गाईले हरेक दिन त्यहाँको उच्च स्थानमा गई दैनिक रुपमा दुध बगाउने गर्द्िथन। त्यहीँ क्रममा एक दिन उक्त नित्यानन्द नाम गरेका ब्राह्मणलाई स्वप्पनामा भगवान् शिवको दर्शन भयो र स्वप्पनामा भनेअनुसार उक्त स्थानमा खन्दैजाँदा भव्य लिंग प्राप्त भयो र पशुपति नाथले विश्वभरि परिचित हुन गयो भन्ने कुराको नेपाल महात्मेमा उल्लेख गरिएको छ । गणतन्त्र आउनु अघिसम्म नेपालका शासकहरुको भगवान् पशुपतिनाथ इष्टदेवका रुपमा पूजा तथा आरधना गर्ने चलन थियो । कुनै बिपत्ति आएमा तथा आउने संकेत देखिएमा राष्ट्र प्रमुखले देशबासीका नाममा पूजा तथा अनुष्ठान गरेमा कुनै पनि बिपत्ति नआउने जनविश्वास रहिआएको छ ।
यसरी पूजा गर्ने पशुपतिनाथको शिवलिंगमा पारस पत्थरको गुण रहेकाले जुन कामनाले जुन बस्तु स्पर्श गर्याे ठिक त्यही फल मिल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यदि फलाम लगेर छोयो भने सुन बन्ने सम्मको चमात्कार उक्त पत्थरमा हुने हुनाले पनि शक्तिशाली रहिआएको छ ।यस्तो पञ्च मुख भएको शिवलिंगको दर्शनका लागि नेपाल लगायत विश्वभर रहेका हिन्दुहरुले दर्शन तथा नियमअनुसार पूजा गर्न पाउँदछन् । यस्तो चमत्कारिक लिंग उत्पपत्ति नेपालमै भएकाले पनि शिवजीको दर्शनका लागि नेपालमा रहेको पशुपतिनाथ नै उत्ततम मानिसको हो । प्रथम लिंगको रुपमा उत्पत्ति भएकाले पनि पशुपतिनाथ नै शिवरात्रीमा उत्तम मानिसको हो ।विशेषगरी नेपालमा रहनेहरुले कुनै प्रकारका शुभकर्म प्ररम्भ गर्नु भन्दा अगाडि पशुपति नाथको दर्शन तथा आशिर्वाद लिएर मात्रै शुभ कर्म प्रारम्भ गर्ने प्रचलन छ ।
गीतामा भनिएको पनि छ – या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । (२।६९) अर्थात् उपवास आदिद्वारा इन्द्रियहरु र मनलाई नियन्त्रण गर्ने संयमी व्यक्ति नै रातमा जागा बसी आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिमा अग्रसर हुन सक्दछ । त्यसैले भगवान् शिवको उपासनाका लागि उपवास र रात्रि(जागरणको ठूलो महिमा छ । रात नै प्यारो लाग्ने भगवान् शिवप्राप्तिको समय रात्रि भन्दा बाहेक अरु कुन हुन सक्दछ ? अतः यी कारणहरुले गर्दा यस महान् पर्वमा शिवभक्तहरु उपवासका साथै रातिमा जागा बसी विधिपूर्वक शिवपूजा गर्ने गर्दछन्
“दु’र्घटनामा परेरमा, शिक्षक शर्माको कैलाश खोलामा अ’न्तिम दा’हासंस्कार गरियो” १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:५६
पाकेट मा’रेको आ’रोपमा अभिनेत्री रुपा प’क्राउ’ १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:५६
जन्ती बो’केको टिपर दु’र्घटना : दुई ज’नाको ज्या’न गयो, २४ जना घा’इते १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:५६
म्यादी प्रहरीको तलब ३० हजार माथि, १ लाख मात्रै भर्ना लिन अर्थको अनुमति १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:५६